‘ब्याजदर विस्तारै स्थिरतातिर जान्छ’ | Business and Economy of Nepal
‘ब्याजदर विस्तारै स्थिरतातिर जान्छ’
Posted on September 3, 2012 by Babukrishna
लामो समयसम्म नबिल बैंकको प्रमुख प्रमुख कार्यकारी पदमा रहेर बैंकलाई माथि ल्याउन विशेष योगदान गरेका अनिल शाह हाल मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा कार्यरत छन् । शाहसँग सौर्यका बाबुकृष्ण महर्जले गरेको कुराकानीको अंश
बैंकिङ क्षेत्रले तरलता अभाव र अधिक तरलता दुवै भोगिसकेको छ, अब यो क्षेत्र कतातिर लाग्दै छ ?
कुनै पनि सेवा या वस्तुको मूल्य बजारले निर्धारण गर्दा प्राकृतिक बिन्दुमा गएर बस्छ । अप्राकृतिक चाहिँ के भयो भने बजारमा तरलताको समस्या भइदियो । तरलता समस्या सरकारको पूर्ण बजेट नआएर भएको हो । गत वर्ष समयमै बजेट आएका कारण तरलता राम्रैसँग आयो । तर, राजनीतिक उथलपुथल, जस्तै संविधान नआउनाले ग्राहकको आत्मविश्वास एकदम कम भयो । आत्मविश्वास कम भएका कारण उनीहरूले न्यून रूपमा मात्र ऋण लिए । त्यसकारण अहिले पनि तरलता फालाफाल छ ।
प्राय: ठूला ऋणीले अहिले कर्जा लिइरहेका छैनन् । ठूला परियोजना आएका छैनन् । मेरो विचारमा तल/माथि दुइटै भएर अब स्थिरतातिर उन्मुख भएजस्तो छ । यो त्रैमासिकमा निक्षेपको ब्याजदर पनि स्थिर हुनथालेको छ । करिब चारदेखि ७ प्रतिशत हाराहारीमा निक्षेप र ऋणदर पनि १० प्रतिशतभन्दा माथि नै गएर स्थिर रहन्छ । एकदम माथि र एकदम तल ब्याजदर रहँदा निक्षेपकर्ता र ऋणी दुवैलाई योजना बनाउन गार्‍हो थियो । मेरो विचारमा अब विस्तारै यो दर स्थिर रहन्छ ।
बैंकहरूले निश्चित अवधिसम्म ब्याजदर स्थिर रहने नयाा ऋण योजना ल्याइरहेका छन्, त्यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिले हामीले स्थिर ब्याजदर हुने दीर्घकालीन कर्जा योजना ल्याएका छैनौँ । बजारमा ब्याजदर एकदम तलमाथि भइरहेका बेलामा यस्ता योजना ल्याउनु हुँदैन र अहिले त्यसका लागि ठिक समय पनि होइन । यस्ता योजना ल्याउन निक्षेप ब्याजदर पनि निश्चित समयसम्म स्थिर राख्न सक्नुपर्ने हुन्छ । म खुला जोखिम लिएर बस्न सक्दिनँ । म आफूले चार वर्षका लागि निश्चित ब्याजदरमा ऋण दिन्छु भने मसँग चार वर्षका लागि निश्चित ब्याजदरमा निक्षेप पनि हुनुपर्छ । यस्तो भएन भने ब्याजदर तलमाथि हुँदा कि त मैले धेरै कमाउँछु कि त म धेरै गुमाउँछु ।
सट्टाबाजी, नाफा–नोक्सान गर्ने बैंकिङ व्यवसाय होइन । एउटा कुरा के हो भने यहाँ जोखिमलाई न्यूनीकरण गरेको भएर निश्चित अवधिसम्म स्थिर ब्याजदर रहने कर्जाको ब्याजदर सामान्यभन्दा केही बढी भने रहन्छ । बजार स्थिर नभइसकेको अहिलेको अवस्थामा यस्तो योजना ल्याउँदा, मेरो विचारमा कारणवश ब्याजदर घट्यो भने ग्राहकलाई घाटा नै हुन्छ । यस्ता योजना सानोतिनो घर कर्जाका लागि भन्दा ठुल्ठूलो हाइड्रोपावर, पूर्वाधार आयोजनाका लागि भने उपयोगी हुन्छ । ब्याजदर स्थिर भएर त्यस्ता आयोजनालाई दीर्घकालीन योजना बनाउन सजिलो हुन्छ । भविष्यमा ठूला आयोजना धेरै बन्न थाले भने मेगाले पनि यस्तो योजना ल्याउँछ तर त्यसका लागि निश्चित ब्याजदरमा निक्षेप उठाउने पनि गर्नुपर्छ ।
बैंकहरूका भिडमा मेगा बैंक कहाा छ ?
हलोदेखि हाइड्रोसम्म सबै नेपालीको बैंक हुने संकल्प लिएर खुलेको बैंक हो मेगा बैंक । गएको दुई वर्षमध्ये पहिलो वर्षमा १२ वटा प्लस प्रधान कार्यालय र दोस्रो वर्षमा १५ वटा गरेर २८ शाखा पुर्‍याएका छौँ । शाखारहित बैंकिङलाई पनि युद्धस्तरमा अगाडि बढाएका छौँ । हलो चलाउने किसानलाई पनि बंैकिङ सेवा दिने उद्देश्यले मेगा बैंकले सूचना प्रविधिको समेत सहयोग लिएर शाखारहित बंैकिङ सेवा सुरु गरेको छ । शाखारहित बंैकिङ यन्त्रको मद्दतले गाउँमा रहेका स्थानीय बैंक साझेदारले ससानो निक्षेप संकलन गर्ने र कर्जा विस्तार गर्ने कार्यसमेत गर्न सक्छन् ।
बैंकसँग ७० हजार ग्राहक छन् । खुद नाफा सात करोड छ । यो हामीसँग खुलेका अन्य बैंकका तुलनामा राम्रै हो । बैंकले नौ अर्बको निक्षेप संकलन र साढे आठ अर्बको कर्जा विस्तार गरेको छ । यस हिसाबले हेर्दा जुन लक्ष्य लिएर हिँडेका थियौँ, त्यही बाटोमा गृहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेजस्तो लाग्छ ।
अहिले बाहिरी वातावरणलाई हेरेर वित्तीय संस्था अगाडि बढ्नुपर्ने बेला छ । वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य ग्राहकको वित्तीय स्वास्थ्यमा निर्भर गर्छ । त्यसकारण अत्यन्त खराब राजनीतिक अवस्थामा र राजनीतिक वातावरण राम्रो भएका दुवै अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बजेट निर्माण गरिरहेका छौँ ।
‘हलोदेखि हाइड्रोसम्म’ नारा दिएर अगाडि बढ्नु भएको छ, यो नारा अलि महत्वाकांक्षी देखिएन र ?
विगत दुई वर्षमा शाखारहित बंैकिङमार्फत तल्लो स्तरका हजारौँ नेपालीलाई वित्तीय सेवा दिएका छौँ । २०/३० जनाको समूहलाई शाखाबाटै होस् वा शाखारहित बैंकिङका माध्यमबाट करोडाँै कर्जा लगानी गरिसकेका छौँ । तर सवाल कसरी बंैकिङ व्यवसाय गर्ने भन्ने हो । अरू बैंकजस्तै बैंकिङ गरेर मेगाको देशको ठूलो बैंक बन्ने लक्ष्य पूरा हुँदैन । फरक काम हामीले गर्नैपर्छ । तल्लो स्तरमा गएर जबसम्म हाम्रो जस्तो बैंकले लगानी गर्दैन, वित्तीय समावेशिता हासिल हुन सक्दैन र अन्तत: देशले आर्थिक वृद्धि गर्न सक्दैन । यस वर्ष हामीले साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) मा केन्द्रित गरेका छौँ । अरू बैंकको ऋण पोर्टफोलियो हेर्दा कर्पोरेट ऋणको हिस्सा बढी हुन्छ । हामीचाहिँ लघु ऋण र एसएमई ऋण मुख्य ऋणका रूपमा रहोस् भनेर फरक ढंगले अगाडि बढेका छाँै ।
संविधान नै नभएका देशमा तुरुन्तै अर्बाैं डलरको ठूला आयोजना आउनेवाला छैन । नेपालमा आउने हो भने १०/१५ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना, सिमेन्ट कारखाना, सुरुङ मार्ग इत्यादि हो । यस्ता आयोजनाका लागि मेगा एक्लैले नसके पनि अन्य बैंकसँग सहकार्य गरेर गर्नसक्ने अवस्था छ । सगरमाथा चढ्छु भनेर अगाडि बढ्यो भने धवलागिरी, अन्नपूर्ण त भ्याइएला नि भनेर त्यस्तो भिजन लिएर मेगा अगाडि बढेको हो ।
मौद्रिक नीतिमा आएको नयाा प्रावधानलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
मौद्रिक नीति भनेको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न ल्याइने परिपूरक नीति मात्र हो । तीन महिनाको बजेट आएका अवस्थामा वर्षभरिका लागि मौद्रिक नीति ल्याउनु भनेको एकदमै गार्‍हो काम हो । केन्द्रीय बैंकले अल्पकालीन र दीर्घकालीन उद्देश्य पूरा गराउने किसिमले ल्याएको यो मौद्रिक नीति मलाई राम्रै लागेको छ । नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न खुला गर्ने नीति राम्रो छ । नेपालमा रहेका वित्तीय संस्थाले नै हरेक वर्ष नगद लाभांशका रूपमा करोडौँ रुपियाँ बाहिर लैजान्छ । नेपालीले पनि विदेशमा लगानी गरेर नगद देश भित्र्याउँछन् भने यसलाई राम्रै कदमका रूपमा लिनुपर्छ ।
बैंक चाँडै नै आइपीमो जान लागेको हुँदा के भनेर लगानीकर्तालाई शेयर किन्न आह्गान गर्नुहुन्छ ?
अल्पकालीन प्रतिफल खोज्ने लगानीकर्ताले चालु वर्षको वासलातमा करिब सात करोड नाफामा देखिएकाले आकर्षक मान्न सक्छन् । दुई वर्षदेखिको सञ्चित मुनाफा र यो वर्षको मुनाफा पनि प्राथमिक सेयर निष्काशनपछि मात्र बाँढ्ने हँुदा लगानीकर्ताले राम्रै लाभांश पाउँछन् । अहिले आउने आइपिओभन्दा हाम्रो अल्पकालीन प्रतिफल राम्रै हुन्छजस्तो लाग्छ ।
दीर्घकालीन लगानीकर्ताका सवालमा चाहिँ मेगाले हलोदेखि हाइड्रोसम्म भन्ने नाराका साथ वित्तीय समावेशिता ल्याउने र नेपालकै ठूलो बैंक बन्ने उद्देश्यसहित फरक क्षेत्रमा फरक काम गरेर अगाडि बढेकाले भविष्यमा देशको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको संस्थाको म पनि एउटा अंग हँु भन्ने बोध गर्नका लागि बैंकको सेयर किन्न अनुरोध गर्दछु ।
« सेयर निष्काशनमा एकभन्दा बढी बिक्री प्रबन्धक सुन धितोमा कर्जा दिने होड »